Faahfaahin Qarax xoogan ka dhacay xeeb loo dalxiis tago oo kaal magaalada Muqdisho – SBC
Faahfaahin Qarax xoogan ka dhacay xeeb loo dalxiis tago oo kaal magaalada Muqdisho
Posted by editor on February 16, 2013 Comments
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay xeebta Liido ee degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho qaraxaasi oo uu sababay dhimasho, dhaawac & waliba burbur hanti isugu jirta gawaari & Baar la aaminsan yahay in uu ahaa yoolka qaraxa.
Warar SBC ka heshay dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhashay baabuur laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa oo la soo dhigay meel gawaarida la dhigto oo ku taal Baarka Liido Sea Food oo ah Baar mudooyinkii ugu dambeeyey ay u dalxiis tagayeen dadweynaha degan magaalada Muqdisho iyo waliba qurbo joogta booqanaysa Muqdisho ama ku soo laabanaya.
Ilaa iyo hada q
araxa waxaa ku geeriyoodey hal qof oo ka mid ahaa shaqaalaha Baarka la bartilmaameystey iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay shan qof oo qaarkood halis yahay dhaawacoodu.
Burbur aad u xoogan ayaa soo gaaray dhismaha Baarka weerarku ku jihaysnaa, iyadoo gawaarida gubatey oo ah nooca raaxada ay dhan tahay tiradoodu 8 kuwaasi oo gabi ahaanba basbeeley.
Saraakiil ka tirsan laamaha amaanka Gobolka Banaadir oo booqdey goobta qaraxu ka dhacay ayaa SBC u sheegay in qaraxa qofkii ka dambeeyey uu gaariga soo dhigay goobta gawaarida la dhigto ee Parking-ka, ka dibna uu isaga tagey.
Sawirada & muuqaalka filimka goobta qaraxu ka dhacay goor dhaw Insha ALAAH kala soco SBC.